David Silva oo qarka u saaran inuu seego kulanka ugu sarreeya Manchester City - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha David Silva oo qarka u saaran inuu seego kulanka ugu sarreeya Manchester...
David Silva oo qarka u saaran inuu seego kulanka ugu sarreeya Manchester City
David Silva ayaa qarka u saaran inuu seego kulanka ugu sarreeya Manchester City oo ay la ciyaarayaan isbuuca dambe Liverpool iyadoo kooxda heysata Premier League ay wajaheyso dhibaatooyin dhaawac marka ay booqaneyso Anfield.
Kabtanka City ayaa ciyaarta soo galay qeybtii labaad kulankii ay sabtidii 2-1 kaga badiyeen Southampton isagoo dhaawac muruqa ah uu soo gaaray.
Pep Guardiola ayaa aaminsan ciyaaryahanka inuusan ku lug yeelan doonin kulanka Arbacada Champions League ay la ciyaarayaan Atalanta iyo kulanka axada ay booqanayaan Merseyside.
City waxaa ka maqnaan doona shan ciyaartoy oo dhaawac ah iyadoo Aymeric Laporte, Leroy Sane, Oleksandr Zinchenko, Rodri iyo Silva.
Afar ka mid ahi ciyaartooydaan waxay kusoo bilaawdeen markii ay labada naadi wada kulmeen, bishii Agoosto tartanka Community Shield.
“David Silva waa dhaawacmay” ayuu yiri Guardiola. “Shan daqiiqo ka hor dhammaadka qeybtii hore wuxuu ii sheegay inuu qabo dhibaato muruq ah. Maysan la hadlin isaga dhaqaatiirta.
Dhibaatada muruqa ah ugu yaraan 10-12 maalmood ayay qaadataa. ”
Guardiola ayaa heysta ikhtiyaar ah inuu isticmaalo Bernardo Silva, kaasoo inta badan xilli ciyaareedkan ka ciyaaray qadka dhexe, laakiin waxa uu ugu yaraan seegi karaa kulanka Champions League ay ku wajahayaan kooxda ka dhisan horyaalka Serie A ee Atlanta
Phil Foden, kaasoo casaan la siiyay kulankii City guul 5-1 ka gaareen Atalanta bishii hore, ayaa ganaax ku maqnaan doona ciyaartaan.
Guardiola ayaa wacad ku maray inuu nasin doono ciyaartoy kulanka ka dhacaya Italy si uu uga fakiro kulanka Liverpool, isagoo sharaxaya arinkaan ayuu yiri: “Waxaan la ciyaareynaa kooxda ugu fiican marka aan booqaneyso Anfield.
Ma jiro qof ii dammaanad qaadi kara haddii aannaan qaban waxa aan doonayo kulanka Liverpool.
“Sida ugu fiican ee loo aado Anfield waa ciyaar wanaagsan ka hor kulanka Atalanta waa inaan wax badan ka fakirnaa.
City ayaa lix dhibcood ka dambeysa Liverpool, laakiin Guardiola ayaa wax adag u arkaya in laga badiyo koox aan garoonkeeda looga badinin Premier League tan iyo bishii April 2017.
Previous articleBayern Munich oo ceyrisay tababaraheedii
Next articleDowladda oo xil u Magacaawday Wiil uu dhalay Eng Yariisow